I-Harga Pen iphrinta i-A3 China Manufacturer
Incazelo:Isimo sokuvumelanisa kwephrinta ye-EPSON Inkomfa ihluleka,Iphrinti yephini yokwenza ikhaya,Iphrinta ye-Pen Handheld
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yephrinta > I-Harga Pen iphrinta i-A3
Uhlobo olusha lwe- Harga Pen iphrinta A3 efundwa e-epson R330 iphrinta. Isimo Sokuvumelanisa Iphrinta ye-EPSON Ukuhluleka kufanelekile ukunyathelisa izinto eziningi, njenge:
Ipulasitiki: acrylic, ABS, PVC, PP, PE, PU njllIndwangu: ukotini, i-nylon, i-polyester, i-spandex. Isikhumba lesikhumba sokufakelwa (isikhumba se-PVC, isikhumba se-PU, isikhumba njll)
Izitsha: igolide, isiliva, ithusi, insimbi, insimbi engagqwali, i-aluminium alloy. Enye: izinkuni, udobe, i-crystal, ingilazi, i-ceramic, itshe njalonjalo
Umbala we-UV ink + UV i-UV encane, ingaphrinta kunoma imuphi umkhiqizo wombala; Ukuhlanza uketshezi: I- Printer Pen Penade ingcono ukugcina amanzi okuhlanza esitokisini, ungase udinge ukuhlanza iphrinta ngelinye ilanga (isibonelo uma uzoshiya lingasebenzi isikhathi eside); I-software ye-RIP iyadingeka ukuze uprinte umbala omhlophe, futhi ICC yayo yangaphakathi kuhle kakhulu ukuphrinta yonke imibala;
Izici eziwusizo zephrinta yethu yePencil Handheld A3 RF-A3UV:
2. I- Harga Pen Printer ingafakwa nge-Height Detecting Sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. I- EPSON Iphrinta yePhrinta Yokuvumelanisa Kwamaphesenti Ukuhluleka I- Ink cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli, uma inkinobho iphelile kuyoba yingozi;
Isimo sokuvumelanisa kwephrinta ye-EPSON Inkomfa ihluleka Iphrinti yephini yokwenza ikhaya Iphrinta ye-Pen Handheld Iphrinta ye-EPSON kagesi Ehlulekile Ukuthengiswa kwephrinta ye-Eva Foam Ukuqhathaniswa kwephrinta ye-UV flatbed Ukulungiswa kwephrinta ye-UV Flatbed Ukulungiswa kwamaphrinta e-Eva Foam